Gaashaan Buurta Nato oo ka hadashay 4 ta wadan ee isugu soo haray koobka aduunka iyo Arrimo Siyaasadeed oo soo baxay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Gaashaan Buurta Nato oo ka hadashay 4 ta wadan ee isugu soo haray koobka aduunka iyo Arrimo Siyaasadeed oo soo baxay
(08-07-2018) Kubadda cagtu waxay hore uga madhnaan jirtay siyaasadda, waxaanay ku koobnayd dhacdooyin ciyaareed oo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda, hase yeeshee markii Argentina ay sannadkii 1986-kii uu Diego Maradona gool gacan ahaa ku reebay xulka qaranka England, waxa dib u unkamay in ciyaaruhu ay siyaasadda ku dhexmilmaan.
Argentina iyo England oo isku haystay jasiirad yar, ayaa waxa uu Maradona wakhtigaas sheegay inuu dagaalkii dalkiisa lagu hayay kaga aargoostay garoonka gudihiisa, taasina waxay sababtay cambaarayn uga timid guud ahaan dunida.
Intaas wixii ka dambeeyey, dalalka isku diiddan siyaasaddu markay wada ciyaarayeen waxa cirka isku shareeri jiray xamaasadda garoonka gudihiisa iyo qaabka layskugu xidhiidhinayo dhacdooyinkii iyo khilaafaadkii dalalka iyo ciyaarta markaas dhacaysa.
Sidaas oo ay tahay, wakhtigan waxa aan isku wanaagsanayn dalalka reer Galbeedka iyo Ruushka oo martigeliyey Koobka Adduunka ee 2018 oo hadda maraya marxaladdihii u dambeeyey, kaas oo ay iskugu soo hadheen afarta waddan ee England, Belgium, Croatia iyo France , kuwaas oo dhamaantood xubno ka ah ururka NATO.
Khilaafka NATO iyo Ruushku marna ma demo, kii ugu dambeeyeyna waxa uu dib u holcay sannadkan gudihiisa markii Ingiriisku ku seedeeyey Russia inay sumeeyeen basaas ku noolaa UK oo dhalasho ahaan kasoo jeeday Moscow, hase yeeshee magan-gelyo ku joogay halkaas. Waxa markaas ay xubno badan oo reer Yurub ah ku dhowaaqeen inay cuno-qabayno kusoo rogayaan Ruushka, madaxdoodiina waxay diideen inay ka qayb-galaan xafladdii furitaanka Koobka Adduunka.
Iyadoo arrintu sidaas tahay, waxa yaab noqotay in afarta waddan ee iskugu soo hadhay Koobka Adduunku ay dhamaantood reer Yurub noqdaan, waliba Ingiriiska oo hormood ka ah siyaasadda reer Yurub uu ka mid yahay dalalka soo baxay.
Haddaba, arrintan ayaa waxay keentay in ururka NATO oo ah mid u samaysan qaab difaac oo dagaal ah, uu ka hadlo ciyaartan, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay ee ay dhacdo.
Barta Twitterka ee NATO ayaa war kooban oo lagu baahiyey waxa loogu hambalyeeyey dalalka iskugu soo hadhay Koobka Adduunka.
“Aafarta waddan ee iskugu soo hadhay Koobka Adduunku waxaa kuwo ka mid ah dalalka NATO. Nasiib wanaagsan ayaanu u rajaynaynaa kooxahan.” Sidaas ayaa lagu yidhi warka NATO shaacisay.
Ciyaaraha semi-finalka isku aadka Koobka Adduunka ayaa waxay dhici doonaan Salaasada iyo Arbacada toddobaadkan, waxaanay iskugu beegan yihiin Belgium vs France iyo England vs Croatia.